सामाजिक दूरीले घट्ला कोरोना भाइरसको संक्रमण ?
अमेरिकामा कोभिड–१९ का कारण पहिलो व्यक्तिको मृत्यु भएपछि विस्तारै संक्रमितको संख्या बढ्यो । त्यसको २ महीनापछि संक्रमित र मर्नेको संख्या बढ्ने क्रम तीव्र भयो । हरेक ३ दिनमा संक्रमितको संख्या यसैगरी दोब्बर बन्दै गयो भने मेसम्ममा अमेरिकामा संक्रमितको संख्या १० करोड नाघ्नेछ । यो गणित हो, भविष्यवाणी होइन । यो घातंकीय वक्रले विज्ञहरूलाई चिन्तित बनाएको छ ।
कोरोना भाइरस मात्रै होइन, यस्ता खालका सरुवा रोगसंक्रमितको सम्पर्क आएपछि सर्छ एवम् रीतले संख्या बढ्दै जान्छ । त्यसैले मानिसको भीडबाट आफूलाई पर राख्नु नै ज्यान जोगाउने उपाय हो भन्छन् विज्ञहरू । मानिसहरूले आफूलाई भीडभाड धेरै हुने ठाउँबाट टाढा राखे, आवतजावत सीमित बनाए भने संक्रमण फैलने क्रम सुस्त पनि हुन सक्छ भन्छन् जनस्वास्थ्य पेशाकर्मीहरू । यस्तो किन हुन्छ त भनेर बुझ्न वाशिङ्टन पोष्टका ह्यारी स्टिभन्सले ‘सिमुलिटस’ (नक्कली रोग)को प्रयोग गरेका थिए । यसमा कुनै स्वस्थ मानिस बिरामीको सम्पर्कमा आउँदा ऊ कसरी बिरामी हुन्छ र एवम् रीतले रोग कसरी फैलिन्छ भन्ने देखाइएको थियो ।
प्रयोगका क्रममा सबैलाई आवतजावत गर्न दिने, क्वारेन्टाइनको प्रयास, मध्यम खालको सामाजिक दूरी र व्यापक सामाजिक दूरी प्रयोग गरियो । यी सबैको नतीजा निकै फरक पाइयो । (नतीजा माथिको चित्रमा देखाइएको छ ।) आवतजावत सबैका लागि खुला गरिदा संक्रमण व्यापक भयो ।
क्वारेन्टाइनको प्रयासले अलिअलि काम त गर्‍यो तर असफल भयो । यस्तो खालको लकडाउन कहिल्यै प्रभावकारी नहुने जर्जटाउन विश्वविद्यालयमा विश्व स्वास्थ्य कानूनका प्रध्यापक लरेन ओ गोष्टिन भन्छिन् । मानिसहरूले माने भने सामाजिक दूरीले निकै राम्रोसँग काम गर्छ । संक्रमण नियन्त्रण नै गर्ने हो भने व्यापक सामाजिक दूरी उपयोगी हुने परीक्षणमा पाइयो ।
तर यसले दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने लगायत प्रश्नको सम्बोधन भने गर्दैन । महामारी सुस्त पार्ने अन्य उपायहरू पनि छन् । मानिसहरूलाई सार्वजनिक स्थलमा जम्मा नहुन, घरभित्रै बस्न, अन्य मानिससँग दूरी कायम गर्न प्रेरित गरियो र उनीहरूले कम आवतजावत गरे, एक अर्कासँग थोरै अन्तरक्रिया गरे भने पनि भाइरस फैलने सम्भावना कम हुन्छ । तर सबै मानिसहरू यसरी थुनिएर बस्छन् त ? अवश्य बस्दैनन् । घरका लागि चाहिने अत्यावश्यक वस्तु किन्न वा त्यस्तै महत्त्वपूर्ण कामका लागि मानिसहरू पक्कै घरबाहिर निस्कन्छन् । उनीहरूले सार्वजनिक स्वास्थ्यको बारेमा दिइएको चेतावनी सुन्दैनन् । यी मानिसहरू आफू त बिरामी पर्छन् नै यिनीहरूले रोग फैलाउन सम्भावना पनि धेरै हुन्छ ।
एक व्यक्तिको व्यवहारले लहरे प्रभाव उत्पन्न गराउँछ अनि यसले टाढाको मानिसलाई समेत छुन्छ । चीनको अनुकरण गर्दै अहिले विश्वभर अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द भइरहेका छन् । भेटघाटको अवसर कटौती गर्दा मानिसहरूलाई सामाजिक दूरी कायम गर्न मद्दत मिल्ने र संक्रमण घट्ने बताउँछन् थोमस जेफर्सन युनिभर्सिटी कलेज अफ पब्लिक हेल्थका जनसंख्या स्वास्थ्य अनुसन्धाता तथा उप–प्रध्यापक ड्रिउ ह्यारिस ।
सोच्नुपर्ने कुरा यी सिमुलिटस वास्तविकता होइन । यसले सरुवा रोग कसरी सर्छ भन्ने मात्रै देखाउँछ । यसबाट मान्छे पनि मर्दैन तर कोभिड–१९ बाट भने मरिरहेका छन् । कोभिड–१९ को मत्युदर ठ्याक्कै यति हो भनेर भन्न सकिएको छैन । तर यसका कारण वृद्धवृद्धा धेरै मरिरहेका छन् । यसको जोखिममा उनीहरू बढी भए पनि बालबालिका र युवा पनि जोखिममुक्त छैनन । सामाजिक दूरी नै संक्रमण कम गर्ने एक मात्रै उपाय भएको चीनको अनुभवले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ ।
(वाशिङटन पोस्टमा प्रकाशित विवरणको नेपाली अनुदित अंश)